ऋणबाट पार पाउन यसाे गर्नुहाेस – Khabar PatrikaNp
ऋणबाट पार पाउन यसाे गर्नुहाेस
August 24, 2020 229
ऋणबाट तनाब मा हुनुहुन्छ ? ऋणबाट पार पाउन यसाे गर्नुहाेस केही हद सम्म मिल्नेछ राहत -अधिकांश मानिसले आफ्ना आवश्यकता पुरा गर्नका लागि ऋण लिने गर्दछन्। उधारो तथा ल्याएको ऋण तिर्न नसके जीवनमा निकै तनाव खेप्नु पर्ने हुन्छ। ऋणको दलदलमा फसेका व्यक्तिलाई बाहिर निस्कन निकै कठिन हुन सक्छ। जुन व्यक्तिको कुण्डलीमा ऋणको दोष हुन्छ त्यस्ता व्यक्तिले उधारो तथा ल्याएको ऋण तिर्न नसक्दा निकै समस्या खेप्नु पर्ने हुन्छ।कुण्डली र ऋणसँग सम्बन्धीत योग ज्योतिषका अनुसार कुण्डलीमा षष्ठम, अष्टम र द्वादश भाव ऋणसँग सम्बन्धीत हुन्छन्। त्यसलाई मंगल ग्रहको कारक मानिन्छ। मंगह कमजोर हुँदा वा पापग्रहसँग सम्बन्धीत हुने हुँदा अष्ठम, द्वादश, षष्ठम भावमा अशुव हुने हुँदा व्यक्ति ऋणी बन्ने गर्दछ।
यदी यी भाव र मंगलसँग शुभ ग्रहको दृष्टी पर्दा ऋण हुन्छ तर त्यसबाट छुट्कारा पाउन सकिन्छ। ध्यान दिनुहोस् मंगलबार र बुधबार धन लेनदेनसँग सम्बन्धीत काम कहिलै गर्न हुँदैन्। ऋणबाट मुक्ति पाउने उपाय शनिबार ऋणमुक्तेश्वर महादेवको पुजा गर्ने मंगलबाट पुजा, दान तथा होम गर्ने र जप गर्ने मंगल र बुधबार ऋण लिने दिने काम नगर्ने रातो र सेतो बस्त्रको प्रयोग गर्ने श्रीगणेशको पुजा आराधना गर्ने बुधबार श्रीगणेशको अथर्वशीर्ष पाठ गर्ने शिवलिंगमाथि प्रत्येक दिन दुध चढाउने ।
मानिसको हरेक इच्छा चाहना पुरा गर्न आफ्नो कमाइबाट नसकेपछि ऋण लिनु पर्ने हुन्छ । आफुले ल्याएको उधारो वा ऋण तिर्न नसके अनेकौ समस्याहरु खेप्नुपर्छ । ऋणको भारी बोकेका मानिसलाई ऋणबाट उम्कन धेरै समस्या झेल्नुपर्ने हुन्छ । ज्योतिष शास्त्र अनुसार जन्मकुण्डलीमा ऋणको दोष भएका व्यक्तिले ऋण दोष हटाउन यी उपाय अपनाउन सके ऋणबाट मुक्त हुन सकिने बताएको छ । जन्मकुण्डलीमा ऋणसँग जोडिएका सम्बन्धीत योग षष्ठम, अष्ठम र द्धादश भाव ऋणसँग सम्बन्धित रहेका हुन्छन् भने यसलाई मंगल ग्रहको कारक पनि भनिन्छ।
१.शनिबारको दिन ऋणमुक्तेश्वर महादेवको पुजा गर्ने ।
२.मंगलबारको दिन पुजा, दान तथा होम गर्ने ।
३.रातो र सेतो वस्त्रको प्रयोग गर्ने ।
४.गणेशभगवानको पुजा आरधना गर्ने ।
५.बुधबारको दिन गणेको अथर्वशीर्ष पाठ गर्ने ।
६.शिव लिङ्गीमा प्रत्येक दिन दूध चढाउने ।
जन्मकुण्डली अनुसार मंगल ग्रह कमजोर हुँदा वा पापग्रहसँग सम्बन्धित हुँदा अष्ठम द्धादश, षष्ठम भाव अशुभ हुन्छ र व्यक्तिमा ऋणको भार थपिदै जान्छ। यी भाव मंगल ग्रहसँग शुभ ग्रहको दुष्टि पर्दा ऋण भएपनि सजिलै छुट्कारा पाउन सकिन्छ । त्यसकारण आज हामी तपाईहरुलाई मंगलबार र बुधबार धन लेनदेनसँग सम्बन्धित रहेर गर्नु नहुने कामको बारेमा बताउन गइहेका छौँ ।
Prevपुजा कोठमा राख्नुहोस् यी चीज,घरमा शंख राख्दा भगवान विष्णु र लक्ष्मीको कृपा प्राप्त हुने विश्वास
Next‘काठमाडौं महानगरपालिका-३१ को अधिकांश स्थानमा कोरोना फैलिएको तत्काल सावधानीका उपाय अपनाउन आग्रह
पाथिभरा माताको दर्शन गर्दै भोली भाद्र १९ गते शुक्रबारको राशिफल पढ्नुहोस भेटी स्वरुप एक सेयर गर्नुहोस
रेडियो पत्रकार महिलाको रहस्य’मय मृ त्यु
जापानमा ३ जना नेपाली चढेको कार दु’र्घटनामा २७ वर्षीय वीरेन्द्र तामाङको नि’धन २ जनाको अवस्था गम्भीर !
टोखामा पुरुषको शव भुईमा लडिरहेको र महिलाको शव झुण्डिएको अवस्थामा भेटिएका दम्पती
श्रीमती सधैं श्रीमानको बाँया तिर किन सुत्छिन….? जानी राखौ (33924)
घरमा भ्यागुतो आयो भने के हुन्छ ? शुभ कि अशुभ… ?थाहा पाउनुहोस (33413)
अन्तत अनिशाले धुरुधुरु रुदै भनिन – ‘म कन्चनलाई अझै पनि माया गर्छु’ (पुरा भिडियो हेर्नुहोस) (32777)
काठमाडौँ महानगरपालिकाका यी ठाउँहरु सिल गरियो, घर बाहिर ननिस्कन प्रशासनको आग्रह !! (29061)
कलिलो यु’वतीहरु राखेर यौ’न धन्दा : भिडियो हेर्नुहोस (27397)
भाग्यमानीको हातमा कति ओटा शंख वा चक्र हुन्छ…..? थाहा पाउनुहोस् (25213)
२५०० तिरे काठमाडौंमा १५ वर्षे किशोरी छ्यापछयाप्ती,साहुनीले १५ सय खाइदिन्छे, मलाई एक हजारमात्रै। थोरै पैसा पाउँदा रुन मन लाग्छ। (22574)
नन्दा सिंह को आखा बाट अन्धकार हट्यो पहिलो चोटि संसार देख्दा खुसिले रोईन (भिडियो हेर्नुहोस) (20168)
होसियार ! क्यान्सर जस्तो खतरनाक रोग निम्त्याउँछ यी ५ खानाको बढी सेवन गर्नाले (19539)
प्रचण्डले भनेः केपीजी निसन्तान हुनुभयो, उहाँको दोष हो ? (भिडियो हेर्नुस्)
दोलखामा सरकारी कर्मचारीले एक दिनमै ८ छाक खाना खाएपछि